အင်တာနက်ဆိုင်တွေအတွက်မရှိမဖြစ်မီးစက&#415 — MYSTERY ZILLION
မြန်မာပြည်က အင်တာနက်ဆိုင်တွေအပါအ၀င် ဘယ်လုပ်ငန်းမဆို မလုပ်ခင်စဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေထဲက အရေးကြီးဆုံးက လျှပ်စစ်မီးပါ။ လျှပ်စစ်မီးမလာတဲ့အချိန်တွေမှာ ဘယ်လိုမီးစက်တွေသုံးကြသလဲဆိုတာ လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ mz က ညီအကိုတွေ ၀ုိငး်၀န်းဆွေးနွေးပေးကြစေလိုပါတယ်။ အင်တာနက် ကဖေးတွေလို မီးမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ အသေးစားနဲ့ အလယ်အလတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက် မီးစက်က တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ရပါတယ်။ denyo လည်းမ၀ယ်နိုင် တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ဆင်ထားတဲ့ တရုတ်နီမီးစက်တွေလည်း သုံးရအတော်အဆင်မပြေပါဘူး။ မုံရွာစက်မှုဇုံက ထုတ်တဲ့ peace brother တစ်လုံးထိုးအသံငြိမ်မီးစက်၊ ကားအင်ဂျင်တွေနဲ့ ပြန်ထိုင်ထားတဲ့ slient မီးစက် နဲ့ အခုနောက်ပိုင်းမှသွင်းလာတဲ့ dragon power မီးစက်တွေကတော့ မသုံးဖူးတော့ ဘယ်လို နေမလဲဆိုတာ သုံးဖူးတဲ့သူများ ပြောပေးကြပါအုံး
မုံရွာက သစ်ဆန်း မီးစက် ကောငး်တယ်ဗျ
Dragon Power Generator ကကောင်းတယ်ဗျ ကျွန်တော်တို.သုံးနေတယ် 16 KVA ပေါ.ဗျာ သုံးကြည်.ပါတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ် Auto Start နဲ. Manual Start ဆိုပြီးနှစ်မျိုးပါတယ်ဗျ Magnetic Type အမျိုးအစားပါ မီးပျက်လျှင် Auto နှိုးအောင်လဲလုပ်လို.ရပါတယ် .....အဆင်ပြေပါစေဗျား.......
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်လဲ စိတ်၀င်စားပါတယ်...
ကျွန်တော်က နယ်မြို့လေးမှာ ကွန်ပြူတာ 10လုံးနဲ့ နက်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားပါတယ်
ခုလောလောဆယ်တော့ တရုတ်မီးစက် (( 2.8kv )) လို့ရေးထားတဲ့ စက်2လုံး၀ယ်ထားပါတယ်
မီးက ခဏခဏ လာတော့ ...3 နာရီ ခြား တစ်ခါ ခြားစက်ကို လဲ ပြီးသုံးရပါတယ်.အဆင် အပြေကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး
(( ခုလောလောဆယ်တော့ တစ်လုံးက ဆိုင်ကိုပို့ထားရပါတယ် ))
KENBO က ထုတ်တဲ့ 5kv စက်တော့ တွေ့ဖူးပါတယ်.. 11 သိန်းနီးပါးလို့ပြောပါတယ် ကောင်းမကောင်းတော့မသိပါ.
peace brother က ထုတ်တဲ့ မီးစက်ကို လဲ စိတ်၀င်စားပါတယ်.သုံးဖူုးတဲ့သူများရှိရင် ကောင်းမကောင်း သိချင်ပါတယ်ဗျာ.
ဆိုင်က တိုးချဲ့ခြင်ပေမဲ့...မီးစက် အတွက် ဂေါင်းစားနေလို့.ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်မသိပါ.....
တန်ဖိုးကြီးပေး၀ယ်ပြီး.အဆင်ပြေမှာ..ကြောက်လို့ပါ.( ပိုက်ိပိုက် မတတ်နိုင်တာလဲ ပါ ပါတယ် ))
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းကိုသုံးပေါ့.(ပိုက်ပိုက်လည်းရှိရင်ပေါ့) ။ကျွန်တော်တို့ဆိုင် ကတော့ တရုပ်အင်ဂျင်(တစ်လုံးထိုး) ကို ဒို်င်နမိုနဲ့ combine တွဲပြီးတော့ထိုင်ထားပါတယ်။ စက် ၁၀လုံး နဲ့ AC နှစ်လုံးလောက်ဆိုရင်တော့နို်င်ပါတယ်။ စျေးကတော့ ၁၀ ပတ်ချာလည်လောက်တော့ကုန်ကျတာပေါ့. original မီးစက်တွေကတော့မစဉ်းစားနိုင်သေးပါဘူး။ အဆင်တော့အခုအထိပြေနေတုန်းဘဲ။
Dragon power ဘယ်လိုအမျိုးအစားကိုပြောတာလဲခင်ဗျာ။ portable ရယ် ဒီဇယ် slient စက်ကြီးတွေရယ် ရှိတယ်လို့သိရလို့ပါ။ slient မှာမှ quanchai engine နဲ့ ဟာနဲ့ isuzu engine ဆိုပြီး၂မျိုးထပ်ရှိတယ်ပြောပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး အသေးစိတ်လေးပြောပေးပါလား
denyo မီးစက်သုံးဖူးတဲ့သူများလည်း အဟောင်းကော အသစ်ပါ ဘယ်ဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်လို့ရလဲ service ဘယ်သူက ပိုကောင်းလဲဆိုတာ ပြောပြပေးကြပါအုံး
မီးစက်အကြောင်းမေးလို့။ ကျွန်တော့်မှာတော့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ဂျပန် 3c အင်ဂျင်နဲ့ 20kw ဒိုင်နမို မီးစက်တစ်လုံးရှိတယ်။ သုံးနေတာ3လလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ အင်ဂျင်ကောင်းကောင်း၊ ဒိုင်နမိုကောင်းကောင်းနဲ့ auto start, remote control နဲ့ နှိုုးတဲ့စနစ်၊ engine saving စနစ် စတာတွေပါတယ်။
ရန်ကုန်ထိုင်စက်ပါ။ အထက်ဘက်က ရွာတစ်ရွာမှာမီးပေးတာပါ။ အခု အဲဒီရွာက မီးသိပ်မယူကြတော့ ဆီဖိုးနဲ့ မကိုက်တာနဲ့ပြန်ရောင်းချင်တာပါ။
28 လောက်ကျထားတာ 20 ရရင် ရောင်းပါမယ်။ အရောက်ပို့ပေးပါမယ်။ စိ်တ်၀င်စားရင်တော့ ဆက်သွယ်ပါခင်ဗျာ။
ကိုညီညီ ( ဖုန်း 01-592285, 09-5129209)
ကျနော်ဆိုင်မှာတော့ တရုတ်နီမီးစက်ကိုသုံးတယ် စက် အလုံး၂၀ ကို ကောင်းကောင်းနိုင်တယ်
သုံးရတာလည်းအ၇မ်းအဆင်ပြေတယ် ဆီကတော့ တနေ့ကုန်တော်တော်လေးပျက်မှ ၃ဂါလံလောက်ဘဲ
ကုန်တာ သုံးကြည့်ကြပါလား အဆင်ပြေတယ် ဒိုင်နမိုက ၂၅ အင်ဂျင်က ၁၅ အဲဒါလေးက ဆိုင်မှာ
ကျနေ်ာဆင်ထားတာလေးပါ အသံလုံအောင်တော့ အိပ်ဇောပိုက်ကို မြေအောက်က မြောင်းထဲကိုထည့်တာလိုက်တယ်
အိုကေတယ် သေချာမေးချင်ရင် ပြန်မေးနိုင်ပါတယ် ကျနော်လည်း အရင်စက်တွေတုံးက ကျနော်လည်းအဆင်မပြေ
အသေးစိတ်လေးပြောပေးပါလား။ ဘယ်လို အင်ဂျင် ဒိုင်နမိုနဲ့လဲဆိုတာရယ်
ဒိုင်နမိုက 25 အင်ဂျင်က 15 ဆိုတာပြောင်းပြန်များဖြစ်နေသလားလို.။ ပုံမှန်ဆို 7.5 kW သို. 10 kW ကို အင်ဂျင်က 22 ကောင် နဲ.တွဲပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် 10 သို. 15 kW ကို အင်ဂျင်က 25 ကောင်နဲ.တွဲပါတယ်။ ဒိုင်နမိုကိုကြီးထားတာတော.မမှားပါဘူး။ စိတ်ချလက်ချမီးကိုသုံးလို.ရပါတယ်။
တရုတ်အင်ဂျင် ၃၂ ကောင်နဲ့ ဒိုင်နမို ကီလို၂၀ တွဲထားပါတယ်။ ဒိုင်နမိုက ၀ပ် ၁၆၀၀၀၀ ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်သုံးတဲ့ load က ၁၂၀၀၀ လောက်ဖြစ်နေတော့ ထုံးစံအတိုင်း တရုတ်ဒိုင်နမိုဆိုတော့ အင်ဂျင်ဒိုင်နမိုတွေ heat တက်တာ၊ နော်ဇယ် ခဏခဏပျက်လို့ ဆီတအားစားတာတွေ ခဏခဏဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ချလက်ချ ဘယ်တော့မှမသုံးရပါဘူး။ အမြဲတမ်း ဘယ်တော့ပျက်မလဲဆိုပြီး စက်ဆရာကိုအားကိုးနေရပါတယ်။ စိတ်ညစ်စရာပါ
တရုတ်နီ မီးစက်ကို တော်တော်များများသုံးကျတယ်နော်။ သူက မာလောက်တယ်ထင်တယ်။ အကိုတို့ရေ တကယ်လို့ စက်အလုံးနှစ်ဆယ်လောက် ရယ် Air Con ၂ လုံးရယ် water cooler တစ်လုံးရယ် ဆိုရင် တရုတ်နီ မီးစက်ကို ဘယ်လို ဆင်ရင် ကောင်းမလဲ .... ဥပမာ ဒိုင်နမို က ဘယ်လောက် ၊ အင်ဂျင်က ဘယ်နှစ်ကောင်လဲပေါ့။ မေးတာ မှားရင်လည်းခွင့်လွတ်ပါဗျာ... ကျနော်က သိပ်နားမလည်ဘူး မီးစက် အကြောင်း
chengchai L32 engine ကို ဒိုင်နမို ၂၀ ကီလို နဲ့တွဲလိုက်။ အဲဒီ load လောက်ဆိုရင်အိုကေတယ်။ load များရင်သာ တရုတ်နီအင်ဂျင်က စိတ်ညစ်ရတာ။
သိလို့ရယ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ကြားဖူးတာ ကတော့ အင်ဂျင်ကိုနှိူးပီးမှ ဒိုင်နမိုဖွင့်၊ပိတ်ရင်လည်း ဒိုင်နမိုကိုအရင်ပိတ် ပီးမှစက်သတ်တဲ့။သိသလောက်လေး၀င်ဖောကြည့်တာပါ။
ကျွန်တော်က မီးစက်အဆင်မပြေဘူးဗျာ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်
peace brother တလုံးထိုးအင်ဂျင်ကိုတော့ကြိုက်တယ်
အင်ဗာတာ 1400 နှစ်လုံး
ဘယ်လောက် Kw ၀ယ်ရမလဲ
20kva ဆိုရနိုင်ပါတယ် စက် အလုံး၂၀ ဆိုတာ lcd နဲ့လား crt နဲ့လား